Kuverenga Bhaibheri Kwemazuva Ano Nhasi Gumiguru 18 | MINYENGETERO MARI
musha Urongwa hwekuverenga Bhaibheri Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi Gumiguru 18
Kuverenga kwedu kwemazuva ese bhaibheri nhasi kunotorwa kubva mubhuku ra2Makor. 1: 1-17 uye 2 Mak. 2: 1-18. Iyi vhezheni yemubhaibheri inotaura nezvekuuya kwaMambo Solomons kutonga samambo weIsreal. Mambo Soromoni vaive mambo wekupedzisira kutonga bhaibheri rakabatana isreal.
2 Makoronike 1: Tinotiudza kuti mambo mudiki Soromoni akatanga sei hutungamiriri nekugamuchira Mwari nekupira chiuru chezvibairo zvinopiswa pamberi paIshe. Pane chidzidzo chakakosha kuve pano, matangiro atinoita zuva redu, isu tinofanirwa kudzidza kutanga zuva redu naMwari. Kana Mwari vatungamira nzira, iye anongoona kukunda mukati medutu. Chechipiri, Soromoni akakumbira kunaIshe huchenjeri, kuti vatonge uye vatungamire vanhu vavo nenzira kwayo. Huchenjeri ndicho chinhu chakakosha, kuwana kwehungwaru ndiko kwakakosha pakubudirira. Haana kukumbira hupfumi kana kufa kwevavengi vake asi akatokumbira njere, hazvishamise kuti aive iye akapfuma mambo akatonga isreal. Chii chauri kukumbira kuna Ishe nhasi? Zvakakosha kuti iwe uzive izvi, njere dzaMwari ndidzo dzese dzaunoda. Zviwanire uchenjeri, zviwanire njere;
Kuverenga kwechipiri kweBhaibheri nhasi kunobva mubhuku ra2 Makoronike 2: 1-18. Tinoona zviitwa zvehungwaru hwaMambo Soromoni, Huchenjeri hunotipa gwara, huchenjeri hunotipa kugona uye huchenjeri hunotibatsira kudzora ruzivo. Ndinonamata kuti paunenge uchidzidza kuverenga bhaibheri nhasi, ngwara dzaMwari ngadzive pamusoro pako nezita raJesu. Verenga uye uropafadzwe.
2 Makoronike1: 1-17:
1 Zvino Soromoni mwanakomana waDhavhidhi akasimbiswa paushe hwake, Jehovha Mwari wake akava naye, akamukurisa kwazvo. Ipapo Soromoni akataura navaIsiraeri vose, kuvakuru vezviuru nemazana, navatongi, namakurukota ose muIsraeri yose, ivo vakuru vedzimba. 2 Naizvozvo Soromoni neungano yose pamwechete naye vakaenda kudunhu rakakwirira rakanga riri paGibhiyoni; nekuti ndipo pakanga pane tende rokusangana yaMwari, yakanga yaitwa naMoses muranda waJehovha murenje. 3 Asi Areka yaMwari yakanga yaiswa naDhavhidhi paKiriatijearimi, akaiisa panzvimbo yakanga yaigirwa naDhavhidhi, nekuti akanga aidzikira tende paJerusaremu. 4 Uye aritari yendarira, yakanga yaumbwa na Bhezareri, mwanakomana waUri, mwanakomana waHuri, yakanga iri pamberi petabhenekari yaJehovha; 5 Ipapo Soromoni akakwira kuaritari yendarira pamberi paJehovha, yakanga iri patende rokusangana, akabayira pamusoro payo zvipiriso zvinopiswa zvine chiuru chezana. 6 Zvino nousiku uhwo Mwari akazviratidza kuna Soromoni, akati kwaari, "Kumbira chaunoda kuti ndikupe." 7 Ipapo Soromoni akati kuna Mwari, Makaitira baba vangu Dhavhidhi tsitsi zhinji, mukandiita ini mambo panzvimbo yavo. Zvino, Ishe Mwari, itai kuti chipikirwa chenyu kuna baba vangu David chisimbiswe, nekuti makandiita mambo wavanhu seguruva renyika pakuwanda. 8 Zvino ndipeiwo njere nezivo, kuti ndibude nokupinda pamberi pevanhu ava, nekuti ndiani angagona kutonga vanhu venyu ava, vakanyanya? 9 Zvino Mwari wakati kuna Soromoni: Nekuti izvi zvakaitika mumoyo mako, uye hauna kukumbira fuma, kana fuma, kana kukudzwa, kana hupenyu hwevavengi vako, uye hauna kukumbira hupenyu hurefu; asi wakazvikumbirira ungwaru nezivo yako, kuti utonge vanhu vangu vandakakuita mambo pamusoro pavo. ndichakupa fuma, nezvakawanda, nokukudzwa, zvisina kumbopiwa mumwe wamadzibaba akakutangira, uye hakungazovi nomumwe unotevera shure kwako. 10 Ipapo Soromoni akabva panzvimbo yakakwirira yakanga iri paGibhiyoni, pamberi peTende Rokusangana, akabata ushe hwaIsiraeri. 11 Ipapo Soromoni akaunganidza ngoro navatasvi vamabhiza, iye ane ngoro dzine chiuru chimwe namazana mana, navatasvi vamabhiza vane zviuru zvine gumi nezviviri, zvaakaisa pamaguta engoro, nokuna mambo paJerusaremu. 12 Zvino mambo akaita sirivheri nendarama paJerusaremu zvikawanda zvikaita samabwe, nemisidhari ikaita semiti yemiouki iri pamupata. Mabhiza aSoromoni akauyiswa kubva Ejipitoni nemucheka werineni: vatengesi vamambo vaigamuchira mucheka werineni nemutengo. 13 Ivo vakanotora, vakabuda paEgipita ngoro imwe namashekeri esirivha ana mazana matanhatu, uye bhiza rimwe nezana namakumi mashanu. Naizvozvo vakaburutsira madzimambo ose avaHiti, namadzimambo eSiria. , nemaitiro avo.
2 Makoronike 2: 1-18:
1 Zvino Soromoni akafunga kuvakira zita raJehovha imba, neimba youshe hwake. 2 Ipapo Soromoni akaudza varume vane zviuru zvina makumi manomwe kuzotakura mitoro, uye zviuru zvina makumi masere kuti vateme mugomo, uye zviuru zvitatu namazana matanhatu kuzovaona. 3 Ipapo Soromoni akatuma shoko kuna Hurami mambo weTire, akati, Sezvamakaitira baba vangu Dhavhidhi, mukavatumira misidhari yokumuvakira imba yokugaramo, mundiitirewo izvozvo. 4 Tarira, ndinovakira zita raIshe Mwari wangu imba, kuti ndiitsaure kwaari, nekupisa pamberi pake zvinonhuhwira zvakanaka, nechingwa chekuratidza, nezvipiriso zvinopiswa mangwanani nemanheru, pamasabata, pakugara kwemwedzi, napamitambo yakatarwa yaJehovha Mwari wedu. Ichi chinhu chakarairwa kuna Isiraeri zvachose. 5 Imba yandinovaka ihuru, nekuti Mwari wedu mukuru kuna vamwari vese. 6 Ndianiko angagona kumuvakira iye imba, sezvo denga nokudenga matenga zvisingamukwanisi? Ini ndiri aniko, kuti ndimuvakire imba, asi kungopisa zvipiriso pamberi pake? 7 Nditumire zvino murume unoshingairira kubata nendarama, nesirvheri, nendarira, nesimbi, neruvara rwepepuru, nemiteya, uye bhuruu, anogona kugona nevarume vanyengeri vaneni. Judha neJerusarema, izvo zvakapihwa naDhavhidhi baba vangu. 8 Nditumirewo miti yemisidhari, nemisipiresi, nemimirati, kubva kuRebhanoni, nekuti ndinoziva kuti varanda vako, vanogona kutema matanda paRebhanoni; zvino tarira, varanda vangu vachava navaranda vako, 9 kunyange kundigadzirira matanda akawanda, nekuti imba yandiri kuzovaka ichava yakanaka kwazvo. 10 Zvino tarira, ndichapa kuvaranda vako, ivo vatemi, ivo vanotema matanda, zviyero zvine zviuru zvamakumi maviri zvezviyo, uye zviyero zvine zviuru zvina makumi maviri zvebhari, nemabhati ane zviuru zvina makumi maviri zvewaini, uye mabhati ane zviuru zvina makumi maviri emafuta. 11 Ipapo Hurami mambo weTire akapindura mutsamba yaakatumira kuna Soromoni, akati, "Sezvo Mwari akada vanhu vake, akakugadza kuti uve mambo wavo." 12 Hurami akatizve, "Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe, iye akagadzira kudenga napasi, akapa mambo Dhavhidhi mwanakomana akachenjera, akangwara uye akangwara, kuti avake imba yaIshe, uye imba yake. humambo. 13 Zvino ndakatuma murume akangwara, anonzwisisa, pamusoro paHuramu baba vangu, 14 Mwanakomana wemukadzi kuvanasikana vaDhani, uye baba vake vaiva murume weTire, nyanzvi paushe hwegoridhe nesirivheri. nendarira, nesimbi, nematombo, nematanda, nepepuru, neruvara rwebhuruu, nemicheka yakaisvonaka, nemabwe matsvuku. uye kuti ubve pakufa kwake chero nzira ipi neipi, uye kuti uwane chinhu chipi nechipi chavaifanira kuitiswa ivo, navarume vako vakangwara, navaranda vashe wangu Dhavhidhi baba vako. 15 Naizvozvo ikozvino, gosi nebhari, namafuta newaini, ishe wangu zvaakataura nezvazvo, ngaazvitumire kuvaranda vake. 16 Zvino tichagura huni muRebhanoni, sezvamunoda; ndichauya nacho kuna Jopa nechikepe pamhenderekedzo yegungwa; iwe uchaikwira kuJerusarema. 17 Ipapo Soromoni akaverenga vatorwa vese vakanga vari panyika yaIsiraeri, pakuverenga kwavakaverenga ivo baba vake Dhavhidhi. vakawana vane zviuru zvine zana nemakumi mashanu nezvitatu, namazana matanhatu.
Baba ndinokutendai neshoko renyu mangwanani ano, ndinorumbidza zita renyu nekundipa huchenjeri hwenyu huizere muna Kristu Jesu .Ndinosaka ndichizivisa kuti ndiri chisikwa chitsva uye ndinofamba muhungwaru hweshura. Kristu vakaitwa kwandiri njere. Ndatenda baba nekuda kwechipo ichi. Kwamuri moga ngakuve kubwinya kwese muzita raJesu.
Kureurura Kwezuva Nezuva:
Ini ndinoparidza kuti ini ndinemafungiro aKristu
Ndinozivisa kuti ndinofamba muhungwaru hwaMwari
Ndinozivisa kuti ndine pfungwa dzakanaka
Ini ndinoparidza kuti ndinonzwisisa zvemashura pazvinhu zvese
Ini ndinoparidza kuti huchenjeri hwaMwari mandiri huchandiendesa pakakwirira muzita raJesu.
Previous nyaya25 minamato inonongedza kupokana nemasimba enzvimbo
inotevera40 Mavhesi eBhaibheri Nezveuchenjeri kjv
Minamato Yekutenda Yekuporesa
Kunamata Points Yenzvimbo Yakakwirira
Yakasimba Maporofita Kuzivisa KweChikamu Chechipiri cheGore
Kunamata Points Kune Chishamiso uye Zvishamiso